Korean zvenhoroondo Mutambo ane Russian nenzwi nokuita: mazita akanakisisa
Arts uye Entertainment, Movies
Unoda Korean nhoroondo mutambo? No? Zvichida chinhu. Zviri chete pakutanga kuaona zvingaita sokuti chinonetsa vakawanda series, zvisinganzwisisiki, nyaya zvachose nomweni, uye vatorwa, dzimwe nguva anosetsa zvokupfeka. Pamwe iwe chete hamuna akasangana munhu zvechokwadi dzinoti "yenyu", iro ichachinja pfungwa enhoroondo mitambo. Tinovimba ndandanda wasarudza nevakawanda yepaTV achawana chinhu chinonakidza uye akakodzera kuteererwa.
Ndandanda "The Best South Korean nhoroondo yepaTV" chakakodzera akatungamirira ino chaiyo chirongwa. A zvinoshamisa vachikanda rinotungamirirwa mutobvu vatambi Lee Min Ho uye Kim Hee-zuva roga kare inofarirwa nevakawanda, uye zvinoshamisa kumabvazuva ndiko akanaka bhonasi.
Zvarongwa inotenderera kujairika rudo nyaya womukuru wavarindi youshe uye chiremba. Zvaizoratidza sokuti ave kufarira pano? pano chete mukuru anogara 1351, uye chiremba - kubva Seoul ano. Yoo Eun Soo haana rombo: akanga panguva isiri nguva isiri nzvimbo. Uye pane kuti kuenda kumba pashure basa, aifanira kufamba nepamagedhi nguva imwe panguva. Hongu, pasi perekedza ane chando akanaka Choi Yong, asi kuti zvisiri kukurudzirwa. How uye chii kudzokera kumusha haana nyore sezvakapikirwa. Saka kugara zvishoma, asi panguva imwe chete kubatsira mambo varambe choumambo, ushamwari muchindakadzi, kuitwa vakapiswa "chiremba Vokudenga" chokuunganidza boka vavengi uye kuhwina moyo embattled mukuru, uyo asiri nyore sezvo zvinoita.
The dzakatevedzana muchafarira mafeni tarisai Korean nhoroondo mutambo ane Russian nenzwi nokuita: zvinobvira kuwana shanduro yakanaka shoma makaziva mapoka fansub.
Muna category "Best Korean dzakatevedzana (mutambo)" Pamazita mberi imwe firimu iri kubudirira kukuru pakati vateereri iri ndima ne "Faith". Rakanga kunzi Nyanzvi of Korean mabhaisikopo, chokwadi kuchengeta refu kwazvo kureva panguva dzinoratidza.
Life Nevatongiwo kwete shuga, uye zvakajairika manzwiro evanhu havasi mutorwa kwavari. Rudo, godo, kumutengesa, uye achiraswa kukanganisa - zvose richawana runako Ki Hwang Hu. Ndeupi varume kusarudza, uye kana kusarudza zvakanaka, teererai mwoyo uye kuvimba chikonzero? Bright rudo nyaya pamusoro colour enyika chivande paitonga ari Yuan youmambo, usabva munhu hanya.
"Anodiwa Princess" (dorama)
Historic Korean sipo operas pakupfutidza kuchiva kwete muduku melodrama ano. Nyaya Li Ren Se uye Kim Sung Yu muchindakadzi rudo kufarirwa nevaya vanoda munhu simba rangano iyo anoramba muchizvidya kusvikira pakupedzisira akatevedzana. The villains dziri varipo pechiitiko ose, anorongera seri vanotaurwa. Ivo uye pasina kuti matambudziko zvakakwana: pakunyanya kuda hanzvadzi ramangwana murume wake, kuva kwako murume - ichi haisi chinosekesa. Kufunga chete uya asingadi kwaireva kuva - zvikuru kusuruvara uye kukuvadza. Anogona rudo kukunda achizodzikinura uye ruvengo anorwisana vanababa kana kuti kukanganwa pamusoro zvinorayirwa mwoyo? Kana kudzokorora nyaya Romeo uye Juliet?
"Moon kugamuchira Sun"
Kana uchida kutarisa Korean sipo operas wokuRussia izwi kuita (dzakaitika mutambo), teerera nyaya iyi kudanana vaine zvinhu zvitendwa.
Crown Prince Lee Hvon pauduku aida Yung-Woo, musikana akamupindura ari kudzoka, saka yekuroorana hazvifaniri kushamisa munhu. Asi kwete vose dzakapoteredzwa Prince kubvumirana sarudzo yake, saka takasarudza kugadzirisa mukomana akakwana "chikanganiso." Nokukurumidza uye nesimba, uchishandisa mashiripiti. En ndakanga rombo, uye akakwanisa kurarama, asi mumwe musikana ane kupa zita rake chairo uye ave Wohl - anozvininipisa mudzidziri webasa nevashamani.
Prince, uyo akafirwa ake waaida, mwoyo wake akavharwa vose uye akava mutongi ane utsinye. Asi musangano tisingatarisiri pamwe Wohl anomuita tora itsva Kutarira nyika uye kamwe zvakare kutenda murudo. Asi vakwegura zvakavanzika inoita chakavigwa zvakanaka, zvakare kumanikidzwa kuti fidgety.
Korea Joseon imba. Country hunotongwa Korol Ondzho, iro rine zvakawanda vavengi vanoda bvikinyidza kwete chete mutongi pasingadiwi kubva pachigaro, asi kuuraya. Kuchengetedza mambo akakoka yakanakisisa murwi, munhu mupenyu nengano munyika zvombo - Baek Su matauriro. Zvino chikwata chake akakuitira chakavanzika villains ndokusunungura Zano.
Korean zvenhoroondo Mitambo inogona ruchiri kukangaidza nokuda kwayo nakisisa uye risingatauriki bhora vatambi vafunge nenzira chaiyo rungano, uko anokudzwa makororo uye zvakaipa zviri chokwadi kuti varangwe.
Little Gema yokupona uduku kuvhunduka uye amnesiac, pokugara varombo uye akamutswa kuti ave mwanakomana wake. Mukomana haana kurangarira nechinhu kubva kare; hakuna huru kana nezvakafanotaurwa kuti akaita njodzi yakaipisisa. Nokufamba kwenguva, achakwanisa kurangarira ndiani, uye kuwana nzira kurwisa zvakaipa - kuva Il Ji Mae. Iye - yeKorea Robin Gud, vachipambara vapfumi uye achibatsira varombo, nguva dzose anyangarike muenzaniso puramu mapazi.
Kana akayera kumbotamba upenyu watsemuka ive nhamo, mune mbiri chete nzira: kugamuchira uye kushandisa kwakamirira njodzi kana kuedza kurwisa. nzira mumwe Anosarudza pachavo kwakavakirwa simba mupfungwa. Young Pak Yong Kang ndozvakaitikawo. Pashure kupondwa baba vake munin'ina mwanakomana, yakanakisisa swordsman wenyika aifanira kusarudza pakati kutsiva uye yokukanganwa, nomunondo uye pfuti. Uye akasarudza nepfuti, chaidzo. Kuuya shure uye kutsiva.
"The Musketeers Vatatu"
Kana uchida munhu Korean nhoroondo mumutambo ane Russian nenzwi nokuita, mumwe remake pamusoro kunozivikanwa chaiwo mabasa achaita changu yokufaranuka. Mumwe anopiwa sokuti Roman Dyuma haasi filmed chete simbe. Saka vokuKorea vakasarudza lag shure uye kuisa ruoko kuti Classics. Zvakazoonekwa zvikuru yepakutanga.
Action anotora vanoiona iri Joseon. Three nevakomana vakanga rombo kuva varindi pakati Crown Prince Co-hyun. Asi zvakadaro matunhu uye repamusoro basa kunosanganisira kugara Makakatanwa: vavengi mugari wenhaka pachigaro akaratidza zvakawanda. Hongu, uye mumwe vachengetedzi vake akakwanisa achawira anoda musikana chete, uye kuti Prince. Saka kufinhikana chete vasina.
"Penyai kana Buruka nemurangariro"
Basa raro - kuva chiedza kune imwe nyika, ane chiedza rima parara. It - kuva chituko nyika yake, muchinda akatukwa uyo hadzingarubitirisi neropa. Chii chinoitika kana vanosangana, chiedza nerima? Ko Shin Yul akakwanisa kushandura Van Co, uye kuti iye kutenda nemano avo?
Korean zvenhoroondo Mitambo kazhinji zvinhu zvitendwa uye zvokufungidzira, vachambokanganwa nenguva. Kazhinji, muzvirevo munguva.
High School Dan Bi akakwanisa kudzokera Joseon nguva, chete anowira pasi gandwa. (Hongu, ndizvo kwakadaro gandwa ine ngozi kusangana kumwe muna Korea ano.) Iye asangana jaya Li Vasati, uyo anotendeuka kubva kuva mumwe kupfuura mambo chaiye. King anofarira masvomhu uye anoedza kuchengetedza simba mumaoko avo, zvinoitika ane rakanaka zvakaipa. The nyika Kuparara, uye pane vakaoma musoro musikana remakore rechi21 akapa. Uye ari kuedza kupa zano ... uye zvinoita sokuti iye ane hanya naye, pasinei ake cantankerous nehasha uye nezvavasingadi wemasvomhu.
"Hong Gil Don"
Kana muchida yakanaka Korean nhoroondo mutambo pasina inofara nekuguma, ichi kunodiwa kuti kuona. Maererano zvakawanda nezvaro, asi anoratidza dzinonakidza uye zvinonakidza, kunyange wokupedzisira uye mwoyo.
Ndiani Hong Gil Don? Oh, muna Korea zviri chaizvo chinozivikanwa unhu: Robin Gud Joseon.
The mubvandiripo mwanakomana mufundisi atiza nemhuri yake, kwete pasina chikonzero chokutya kuti upenyu hwavo: mhuri vanoona simba mukwikwidzi ari kurwira simba. Jaya yakabatana makororo uye nokukurumidza akava mutungamiri wavo, asi chikwata chake ndiye "Wandinyengedzerei" Ivo kutorera machinda vapfumi uye kupa mari kuvarombo. Zvichida jaya angadai akaramba saka nyore gororo, asi upenyu akasarudza kudaro. Nyika vakadzokera Lee Chang Hwi - akakodzera mugari wenhaka kune pachigaro mutongi, uyo anorota vavezve choushe, uye musikana uye NOC. Dzidziso iyi inobva ava vatatu zvine chokuita.
Chero zvazvingava, kusarudza Chinese, Korean nhoroondo Adventure, mutambo ane kudanana zvokufungidzira kana kutsvetera, ziva kuti iwe uchanakidzwawo yakajeka mavara hauzozvikanganwi. Costumes, girl, mumhanzi kuchaita kuroverera kunyange farira moviegoers.
The firimu "The Hangover": vatambi uye mabasa
List kuti comedies yemhuri unodziya manheru kumba
The mutambi Vasileva Ekaterina Sergeevna: Biography, Filmography
Tabrett Bethell: Biography uye Filmography ari mutambi
Mafirimu New 2015 list, rating, description, wongororo uye ratings
Utsotsi mutambo "Ocean kuti 13": vatambi, mabasa, rangano
Chidimbu "Sir kubva kuSan Francisco" I.A. Bunin
Laser Comb Power Vachikura Comb: wongororo vanachiremba, nheyo chiito uye efficacy
Salad "Hove" - mufaro nokuti vakuru nevana
Otitis nzeve dzayo kurapwa
Pyelonephritis uye chisingaperi renal kukundikana, kurapwa, dziviriro
Restaurant "Aurora" muna Medvedkovo: tsananguro uye wongororo
Phones vane maredhiyo maviri pamusoro "Android"
Sezvo mudzimai wepamba kuwana basa uye handizvidyi moyo
The Life uye Kufa Jeremy Bentham ( "Lost")
Hondo: kudyara uye kuchengeta
"Anberanda" - kutandara centre (Sochi)